Bananka Bananka Dharka, Dharka Barkinta Bannaanka, Dharka Oxford - Dro
Hangzhou Dro Textile Co., Ltd. waa shirkad hormood u ah dharka oo ku milma wax soo saarka iyo ganacsiga. Waxaan leenahay koox ganacsi khibrad leh & xirfad leh. Waxaan haynaa in ka badan 5,5Noocyada noocyada ah ee loo heli karo macaamiisha inay doortaan( qaabab dheeh & daabacan) laga bilaabo iyo qadarka qaabku waa ku koraya heer joogto ah 15% sanadkiiba. Iyada oo tayo sare leh iyo waxtarka sare, sidoo kale awoodda xoogan ee loo habeyn karo sida macaamiisha u baahan tahay.Waxay leedahay khibrad fara badan oo ku saabsan ganacsiga dhoofinta dharka iyo sumcad wanaagsan ku leh warshadaha.
Waxaa la aasaasay sanadkii 2009
In ka badan 5000 + Alaab la heli karo
15% + Koraaya Degdeg ah
Polyester Leopard Daabacay
Kuwani waa taxanaha 'Camouflage' ee la heli karo Sharaxa Sharaxa Alaabada Dahaarka ballaca miisaanka 170T PU Dahaarka 40 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 170T （HD） PU Dahaarka 45 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 180T PU Dahaarka 48 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 180T （HD） PU Dahaarka 49g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 190T PU Dahaarka 50 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 190T （HD） PU Dahaarka 52g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 210T PU Dahaarka 57 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 170T Sliver dahaarka 49 g / ㎡ 150cm / 170cm / 1 ...
Caleenta Caaga Daabacan
Polyester Ham Ubaxa P ...
Polyester Joometri Pri ...
Qiimaha 190T polyester f ...
Kuwani waa taxanaha 'Camouflage Series' oo la heli karo oo Gaar ah ...
180T soosaarka Shiinaha ...
Tayada Sare 170T Dyed ...
Looxa Fabric Waayo Out ...
Kuwani waa taxanaha 'Camouflage Series' oo la heli karo ...
Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada dharka polyester
I. Faa'iidooyinka dharka polyesterka: 1. Dharka polyester-ku wuxuu leeyahay awood sare. Awoodda fiber-ka daruuriga ahi waa 2.6 ~ BAI5.7 cN / Dtex, xoogga fiber-ka-sare waa 5.6 ~ 8.0cN / Dtex. Sababtoo ah hantideeda 'hygroscopic low', xooggeeda qoyan iyo xoogga qalalan asal ahaan waa isku mid. Saameyntiisa ...
Taffeta waxaa sidoo kale loo yaqaannaa polyester taffeta, waa dhar aad ugu badan nolosha, laakiin marka lagu daro dadka xirfadleyda ah, dadka caadiga ah fahamkiisa ma cadda, sidaa darteed waxaan u nimid inaan fahamno astaamaha polyester taffeta. Taffeta dhar Polyester sifooyinka dharka dharka: Polyest ...